Qalabka Android - Telefoonnada, kiniiniyada, smartwatch iyo in ka badan! | Androidsis (Bogga 9)
Waxaan kuu sheegeynaa macluumaadka ugu dambeeya ee ku saabsan kiniinka Samsung Galaxy Tab S6, oo ah aalad ka gudubta shahaadada Koonfurta Kuuriya.
Galaxy Watch Firfircoon oo ay leedahay dib u eegis TOUS
Maanta waxaan ka hadleynaa qalab aad u gaar ah oo loogu talagalay haweenka dhagaystayaasha ah. Waxaan nasiib u helnay inaan awoodno inaan tijaabino ...
Jimcaha ugu fiican Black Friday 2019 heshiisyada Amazon
Toddobaadka Jimcaha Madow wuxuu naga dhigayaa qashin badan oo dalabyo ah, dalabyo aan ku tusinno qodobkan oo aan maalin walba cusbooneysiinayno.
10% qiimo dhimis ah dhamaan diyaaradaha aan duuliyaha wadin ee SwellPro
Ka hel qiimo dhimis 10% ah drones SwellPro oo leh qiima dhimisyadan Jimcaha Madow. Ku raaxayso mid ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ugu wanaagsan suuqa qiimaha ugu fiican
Soo saaraha Aasiya ayaa soo bandhigay Huawei Sound X, oo ku hadla caqli badan oo u yimaada inuu la tartamo Amazon Echo iyo Google Home. Faahfaahinta oo dhan.
Pixel 3 waxaa lagu iibiyaa dukaanka rasmiga ah ee Google
Haddii aad qorsheyneysay inaad iibsato Google Pixel 3, waxaan haynaa war xun, maaddaama Google joojisay keydka si uusan mar dambe suuqa uga heli doonin.
Haddii aad rabto inaad iska ilaaliso la shaqeynta goobta taleefankaaga casriga ah ee baaritaanka INE, hoos ayaan kuu sheegi doonaa sida aad uga fogaan karto.
Google wuxuu dib u habeyn ku sameeyaa Play Store-ka laga heli karo Wear OS
Google ayaa dib u habeyn ku sameysay Wear OS Play Store, iyadoo hadda muujineysa nashqad aad uga cad cad qaabkii hore, taasoo ah tallaabo lagu xoojinayo isticmaalkeeda dadka isticmaala.
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan bilaabista rasmiga ah ee Roborock S5 Max ee Aliexpress halkaas oo ay ku timid qiimo dhimis weyn oo ku saabsan sicirkeeda si ku meel gaar ah.
Raadi wax badan oo ku saabsan kororka iibka smartwatch ee adduunka inta lagu jiro rubuca saddexaad ee sanadkan sida horeyba loo shaaciyey.
Raadi wax badan oo ku saabsan qorshayaasha Nokia ay ku daah furayaan TV-ga ugu horreeya ee Smart TV dhowaan si rasmi ah gudaha Hindiya, sidaad horayba u barateen.
Awoodda is-maamul ee smartwatches marwalba waxay dhibaato ku ahayd adeegsadayaal badan, dhibaato waxay kuxirantahay sidaad u aragto, ilaa ...
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan qiimo dhimista aad ka heli karto Roborock S5 Max munaasabadda ay suuqgeedu bilaabmayso 11.11.
Riyadii ayaa rumowday: Xiaomi Smart TVs ayaa yimid Spain
Dhamaan faahfaahinta si rasmi ah u bilaabista Xiaomi Smart TV-yada Spain. Helitaanka iyo qiimaha 4, 32 iyo 43-inji Mi TV 55S
Google wali kama tagin jiilka 1aad ee Pixel
Jiilka 1aad ee Pixel range wuxuu ka heli doonaa cusbooneysiin cusub Google, oo noqon kara kii ugu dambeeyay.
Roborock S5 Max ayaa dhawaan yimaadda Yurub qiimaha ugu fiican
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan daahfurka Roborock S5 Max robot vacuum nadiifiye ee Yurub, kaas oo suuqa ugu dhici doona qiimo dhimis aad u weyn, sida horay loogu dhawaaqay.
Cusboonaysiinta amniga ee Noofambar ee qaybta Pixel hadda waa la heli karaa si loo soo dejiyo.
Jiilkii ugu horreeyay ee Pixel-ka Google wuxuu gaaray seddex sano jir, mana ka heli doono shirkadda wixii cusbooneysiin amni dheeraad ah.
Cusboonaysiinta Amniga Noofambar ee Samsung ee S10 iyo Xusuusin 10 Hadda Waa La Heli Karaa
Cusbooneysiinta amniga bisha Nofeembar ee Galaxy S10 iyo Galaxy Note 10 ayaa hadda laga heli karaa adduunka oo dhan.
Redmi Note 8T waxay yeelan doontaa 18W lacag deg deg ah
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan lacagta degdegga ah ee 18W ee laga heli doono Redmi Note 8T maadaama horeyba loogu faafiyey warbaahinta kala duwan ee Shiinaha.
Ka ogow wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta Android 10 ee loogu talagalay OnePlus 6T ee bilaabaya helitaanka OTA oo leh qaab deggan oo rasmi ah.
Google ma furi doono xakamaynta tilmaanta Pixel 4 ee horumarinta
Raadi wax badan oo ku saabsan sababta Google uusan u rabin inuu u furo Motion Sense API, xakameynta tilmaanta Pixel 4, ee horumarinta hadda.
Sharaf inaad si dhakhso leh u bilowdo seddex taleefan oo ku habboon 5G
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan qorshaha Honor ee ah in 5G lagu daro taleefannadeeda kahor dhammaadka sanadkan maadaama horay loogu yiqiinay warbaahinta kala duwan.
Kaamirooyinka Xiaomi Mi Note 10 oo faahfaahsan
Soo hel dhammaan faahfaahinta ku saabsan kaamirooyinka Xiaomi Mi Note 10 oo yeelan doona shan kamaradood oo gadaal ah oo leh dareeraha 108 MP sida ugu weyn.
Xiaomi Mi MIX 4 ayaa daadanaya. Waxaad umuuqaneysaa shaashadeeda!
Dhamaan faahfaahinta naqshadeynta Xiaomi Mi MIX 4, taleefan u istaagi doona inuu yeesho shaashad cajaa'ib leh oo lala yaabo gudaha.
Sawirrada rasmiga ah ee Motorola RAZR cusub ayaa soo ifbaxay, taleefanka casriga ee isku laaban ee suuqa ku dhacaya
Maalmo ka hor soo bandhigida rasmiga ah ee jiilka cusub ee Motorola RAZR, sawirro fara badan ayaa la sifeeyey kuwaas oo na tusaya naqshadda dhammaan quruxdeeda.
Raadi wax badan oo ku saabsan iibka wanaagsan ee Galaxy Note 10 kaas oo ka caawinaya Samsung hagaajinta natiijooyinkeeda seddexdii biloodba mar.
Sida laga soo xigtay rasmi rasmi ah, Huawei wuxuu horey u sii daayay Android 10-ku saleysan EMUI 10 beta xiran oo loogu talagalay Mate 20X 5G, inkasta oo kaliya Shiinaha.
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan taariikhda Xiaomi Mi Note 10 lagu soo bandhigi doono Yurub, iyada oo loo dabaaldegayo dhacdo ka dhacday Poland.
Vivo Y3 Standard Edition: Nooca noocyadiisa cusub ee heerka soo-gelinta
Soo ogow wax walba oo ku saabsan Vivo Y3 Standard Edition, taleefanka cusub ee ku jira qaybta hoose ee astaanta ee horay loogu soo bandhigay Shiinaha.